पीसीआरको अन्तिम रिपोर्ट नेपालगञ्जकै कुर्नु पर्ने भित्रि रहस्य - Paschimnepal.com
पीसीआरको अन्तिम रिपोर्ट नेपालगञ्जकै कुर्नु पर्ने भित्रि रहस्य
सुर्खेत । कर्णालीमा कोरोना परीक्षण गर्ने तीन ओटा पीसीआर मेसिन छन् । सुर्खेतको प्रदेश अस्पताल, पशु स्वास्थ्य प्रयोगशालाको भवन र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना परीक्षण गर्ने मेसिन जडान गरेर परीक्षण भइरहेको छ । प्रदेश अस्पतालमा जडान गरिएको मेसिन पोर्लीमर्च चेन रिएक्सन (पीसीआर) हो भने जुम्ला र पशु स्वास्थ्य प्रयोगशालाको रियल टाइम पोलिमर चेन रिएकसन (आरटी पीसीआर) हुन् ।
तस्वीर डा. नवराज केसीकाे फेसबुकबाट ।
प्रदेश अस्पतालमा जडान गरिएको मेसिनको क्षमता दैनिक १५ ओटाको मात्रै रिपोर्ट निकाल्छ भने बाँकी दुई मेसिनबाट एकै पटक ९६ ओटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । तर अत्याधुनिक मेसिन सुर्खेत र जुम्लाहुँदा अन्तिम रिपोर्ट नेपालगञ्जबाट कुर्नु परेकाे भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको विरोध भइरहेको छ ।
सुर्खेत र जुम्लामा जडान भइ सञ्चालनमा भइरहेका मेसिनले कम्तीमा पाँच ओटा कोरोना संक्रमितको स्वाबको रिपोर्ट पोजेटिभ देखाउनु पर्छ । ति पोजेटिभ रिपोर्टलाई अर्को आरटी पीसीआर मेसिनले पनि पोजेटिभ नै भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
‘यहाँको मेसिनले शुरुमा देखाएको पोजेटिभ रिपोर्टलाई अन्तिम मान्दा पछि समाजमा नकरात्मक असर पर्छ’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. लक्ष्मीनारायण तिवारी भन्छन्, ‘शुरुशुरुका रिपोर्टहरु अनिवार्य अर्को आरटी पीसीआरमा चेकजाँज गर्नुपर्छ । पाँच रिपोर्ट पोजेटिभ देखाएमा सुर्खेतबाट नै पुष्टी गर्न मिल्छ ।’
अनिवार्य एक ठाउँमा परीक्षण भएको रिपोर्ट अर्को प्रयोगशालामा पठाउने मेडिकल नियम रहेको तिवारी बताउँछन् । उनकाअनुसार नेपालका पहिलो कोरोना संक्रमितको रिपोर्ट काठमाडौंमा परीक्षण गरेपनि पुनःपरीक्षणका लागि विदेश पठाइएको थियो ।
सुर्खेतमा परीक्षण गरिएका ९ शंकास्पद रिपोर्ट मध्य चार ओटा कोरोना पुष्टी भइसकेका छन् । आज देखिएका पाँच शंकास्पद रिपोर्ट पनि नेपालगञ्जमा पोजेटिभ देखिए स्वास्थ्य मन्त्रालयले अबका रिपोर्ट सुर्खेतबाटै कोरोना पुष्टी गर्ने अख्तिायरी दिइने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश अस्पतालका डा. नवराज केसीले सुर्खेतमा पोजेटिभ देखिएकाहरुको अन्तिम रिपोर्ट नेपालगञ्ज पठाउनु स्वभाविक प्रक्रिया भएको भएको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
केसीले भनेका छन्, ‘सुर्खेतको CORONA-PCR मेशिन नक्कली होइन । जर्मनको ब्रान्डेड मेशिन हो । रेपोर्टिङ् को अधिकार प्राप्त गर्न कम्तिमा ५ वोटा POSITIVE केसहरु प्रयोगशाला अधिकार प्राप्त भैसकेका LAB सँग समोनय गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसै पहिलो5POSITIVE रिपोर्ट सुर्खेतबाट नेपालगन्ज ( जहाँ सुर्खेत भन्दा पहिले corona देखियो ) पठाउने गरेको हो र अब केही दिन मै सुर्खेतबाट बाहिर पठाउन नपर्ने कुरा सबैमा जानकारिको लागी अनुरोध गरिन्छ । हाम्रा LAB का साथीहरु महिनौ देखी घर नै नगएर ज्यान को बाजी राखेर दिन रात काम गरिरहेका छन यिन्को सम्मान गरौ। भ्रम न फैलाउन अनुरोध गर्दछु ।’
प्रकाशित मितिः आइतवार, जेष्ठ ११, २०७७ 10:15:54 AM
Prevसुर्खेतका थप पाँच जनाको रिपोर्ट शंकास्पद
Nextदैलेख सदरमुकामको कालोपत्रे छियाछिया